Sh Xasan Dahir Aweys "Qabaailada Muqdisho ha u dagaalameen sida kuwa Wasiiristan" – SBC
Sh Xasan Dahir Aweys "Qabaailada Muqdisho ha u dagaalameen sida kuwa Wasiiristan"
Sh Xasan Daahir Aweys oo ahaa gudoomiyihii ururkii Xisbul islam iminkana ku biiray xarakada Alshabaab ayaa maanta kulan saxaafadeed uu ku qabtay gudaha Muqdisho waxa uu kaga hadlay dagaalada xoogan ee ka soconaya gudaha Magaalada Muqdisho gaar ahaan aaga Suuqa weyn ee Bakaaraha .
Sh Aweys ayaa sheegay in ciidamada DKMG ah iyo kuwa Amisom ay duulaan gardaro ah ku soo qaadeen goobo badan oo ay ka arimineysay Xarakada Alshabaab islamarkaana taasi aysan ku gaareynin wax guul ah islamarkaana ay iska caabin sameeyeen dhankooda .
Dhinaca kale mar uu ka hadlayay Sheeqa doolaanka ciidamada DKMG ah iyo kuwa Amisom ay gudaha ugu galeen suuqa Bakaaraha ayaa waxa uu sheegay in ay tahay mid ay ku doonayaan in ay kula wareegaan hantida ganacsatada Suuqa Bakaaraha sida uu hadalka u dhigay.
Waxaase uu ugu baaqay Ganacsatada Suuqa Bakaaraha in ay iska difaacaan weerarada Cidamada Dowlada KMG ah oo uu ku tilmaamay duulaan lagu doonayo in lagu dhaco hantidooda, dagaalka soconayana uu yahay mid aan loo kala hareynin shacay iyo Alshabaaba .
sidoo kale waxa uu ugu baaqay Qabaailada ku dhaqan Magaalada Muqdisho in ay dhankooda iyana ka qeyb qaataan dagaalada lagula jiro DKMG ah iyo Amisom iyagoona la mid noqonaya Qabaailada ka dagaalameysa Wasiiristaan ee Dalka Pakistan.
Shirkan Jaraaid ee Sh Xasan Daahir Aweys uu ku qabtay Muqdisho ayaa ku soo aadaya xili laba maalmood oo xiriir ah ay ka dhacayaan magaalada Muqdisho dagaalo xoogan oo ay ciidamada DKMG ah ku sheegteen guulo iyo in ay gudaha u galeen fariisimadii ugu waaweynaa xarakada Alshabaab sida Suuqa Bakaaraha.
SBC International- Muqdisho .